1. Ukuvikelwa kwedatha shazi
Imininingwane elandelayo inikeza umbono olula walokho okwenzeka kwimininingwane yakho lapho uvakashela iwebhusayithi yethu. Idatha yomuntu siqu yiyo yonke imininingwane ongakhonjwa ngayo uqobo. Imininingwane eningiliziwe ngendaba yokuvikelwa kwedatha ingatholakala kusimemezelo sethu sokuvikelwa kwedatha esikuhlu ngezansi kwalo mbhalo.
Ukuqoqwa kwedatha kuwebhusayithi yethu
Ngubani obhekele ukuqoqwa kwemininingwane kule webhusayithi?
Ukucutshungulwa kwedatha kule webhusayithi kwenziwa ngumhlinzeki wewebhusayithi. Ungathola imininingwane yabo yokutholwa ngokufakwa kule webhusayithi.
Siqoqa kanjani idatha yakho?
Ngakolunye uhlangothi, idatha yakho iqoqwa lapho uyixhumana nathi. Lokhu kungaba, isibonelo, idatha oyifaka kwifomu lokuxhumana. Eminye imininingwane iqoshwa ngokuzenzakalela yizinhlelo zethu ze-IT lapho uvakashela iwebhusayithi. Lokhu ikakhulukazi imininingwane yezobuchwepheshe (isb. Isiphequluli se-inthanethi, isistimu yokusebenza noma isikhathi sekhasi kubukiwe) Le datha iqoqwa ngokuzenzakalela ngokushesha nje lapho ufaka iwebhusayithi yethu.
Sisebenzisela ini idatha yakho?
Eminye idatha iqoqwa ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi ayinaphutha. Enye idatha ingasetshenziselwa ukuhlaziya ukusebenza komsebenzisi wakho.
Unelungelo lokuthola imininingwane ngemvelaphi, umamukeli nenhloso yemininingwane yakho egcinwe mahhala nganoma yisiphi isikhathi. Unelungelo futhi lokucela ukulungiswa, ukuvinjwa noma ukususwa kwale datha. Ungaxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi ekhelini elinikezwe kwisaziso somthetho uma uneminye imibuzo ngokuvikelwa kwedatha. Unelungelo futhi lokufaka isikhalazo kuziphathimandla eziphethe kahle.
Amathuluzi wokuhlaziya namathuluzi avela eceleni
Lapho uvakashela iwebhusayithi yethu, indlela ohlola ngayo ama-surfing ingahlolwa ngokwezibalo. Lokhu kwenziwa ikakhulukazi ngamakhukhi nezinhlelo ezibizwa ngokuhlaziya. Ukuziphatha kwakho kwe-surfing kuvame ukuhlaziywa ngokungaziwa; ukuziphatha kwe-surfing akunakulandelwa kuwe. Ungakuphikisa lokhu kuhlaziywa noma ukuvimbe ngokungasebenzisi amathuluzi athile. Ungathola imininingwane enemininingwane ngalokhu kulesi simemezelo sokuvikelwa kwedatha okulandelayo. Ungaphikisana nalokhu kuhlaziywa. Sizokwazisa ngamathuba wokuphikisa kulesi simemezelo sokuvikelwa kwedatha.
2. Imininingwane ejwayelekile kanye nolwazi oluyimpoqo
Abasebenza kule webhusayithi bakuthatha ngokungathi sína kakhulu ukuvikelwa kwemininingwane yakho. Siphatha imininingwane yakho iyimfihlo futhi ngokuya ngemithetho esemthethweni yokuvikelwa kwedatha kanye nalesi simemezelo sokuvikelwa kwedatha. Lapho usebenzisa le webhusayithi, kuqoqwa imininingwane ehlukahlukene yomuntu siqu. Imininingwane yomuntu uqobo yimininingwane ongakhonjwa ngayo uqobo. Lesi simemezelo sokuvikelwa kwedatha sichaza ukuthi iyiphi idatha esiyiqoqayo nokuthi siyisebenzisela ini. Kuchaza nokuthi lokhu kwenziwa kanjani futhi ngayiphi injongo. Siveza ukuthi ukudluliswa kwedatha nge-Intanethi (isb. Lapho kukhulunywa nge-imeyili) kungaba nezikhala zokuphepha. Ukuvikelwa okuphelele kwedatha ekufinyeleleni kwabantu besithathu akunakwenzeka.
Qaphela emzimbeni onomthwalo
Umzimba obhekele ukucutshungulwa kwedatha kule webhusayithi yi:
Ucingo: +49 (0) 89 21 540 01 42
Umzimba ophetheyo ngumuntu wemvelo noma wezomthetho, yedwa noma ngokuhlanganyela nabanye, onquma ngezinhloso nangezindlela zokucubungula imininingwane yomuntu (isib. Amagama, amakheli e-imeyili, njll.).
Ukuchithwa kwemvume yakho ekusetshenzisweni kwedatha
Imisebenzi eminingi yokucubungula idatha kungenzeka kuphela ngemvume yakho eqondile. Ungabuyisa imvume yakho noma kunini. I-imeyili engakahleleki kithi yanele. Ukuba semthethweni kokucutshungulwa kwedatha okwenziwe ngaphambi kokuchithwa kuhlala kungathinteki ekuhoxisweni.
Ilungelo lokudlulisa icala kuziphathimandla zokuphatha ezibhekele lokho
Uma kwenzeka kwephulwa umthetho wokuvikelwa kwedatha, umuntu othintekayo unelungelo lokufaka isikhalazo kuziphathimandla ezifanele zokuphatha. Isiphathimandla sokuphatha esifanelekile sezinkinga zokuvikelwa kwedatha yisiphathimandla sokuvikela idatha yombuso wombuso lapho inkampani yethu izinze khona. Uhlu lwezikhulu ezivikela imininingwane nemininingwane yazo yokuxhumana lungatholakala kusixhumanisi esilandelayo: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .
Ukuphatheka kwesokudla kwedatha
Unelungelo lokuba nedatha esiyicubungula ngokuzenzekelayo ngesisekelo semvume yakho noma ukugcwalisa inkontileka enikezwe wena noma umuntu wesithathu ngendlela efanayo, efundeka ngomshini. Uma ucela ukudluliswa okuqondile kwemininingwane komunye umuntu onomthwalo wemfanelo, lokhu kuzokwenziwa kuphela uma kungenzeka ngokomthetho.
Ukubethela kwe-SSL noma kwe-TLS
Ngezizathu zokuphepha nokuvikela ukudluliswa kokuqukethwe okuyimfihlo, okufana nama-oda noma imibuzo oyithumela kithi njengo-opharetha bewebhusayithi, leli sayithi lisebenzisa i-SSL noma. Ukubethela kwe-TLS. Ungabona uxhumano olubethelwe ngeqiniso lokuthi ulayini wekheli wesiphequluli uyashintsha ukusuka ku- “http: //” uye ku- “https: //” nangophawu lokukhiya kulayini wakho wesiphequluli. Uma ukubethela kwe-SSL noma kwe-TLS kusebenza, idatha oyidlulisela kithi ayinakufundwa ngabantu besithathu.
Imininingwane, ukuvimba, ukususwa
Ngaphakathi kohlaka lokuhlinzekwa kwezomthetho okusebenzayo, unelungelo lokukhulula imininingwane emayelana nemininingwane yakho egciniwe, imvelaphi yabo nomamukeli kanye nenhloso yokucubungula idatha futhi, uma kunesidingo, ilungelo lokulungisa, ukuvimba noma ukususa le datha. Ungaxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi kukheli elinikezwe kwisaziso somthetho uma uneminye imibuzo mayelana nendaba yomuntu siqu.
3. Ukuqoqwa kwedatha kuwebhusayithi yethu
Amanye amawebhusayithi asebenzisa okuthiwa amakhukhi. Amakhukhi awalimazi ikhompyutha yakho futhi aqukethe amagciwane. Amakhukhi enza ukwenza ukunikezwa kwethu kube okusebenziseka kalula, kusebenze ngempumelelo futhi kuphephe kakhudlwana. Amakhukhi amafayili wombhalo amancane agcinwe kwikhompyutha yakho futhi agcinwe yisiphequluli sakho. Amakhukhi amaningi esiwasebenzisayo abizwa ngokuthi “amakhukhi eseshini”. Zisuswa ngokuzenzakalela ngemuva kokuvakasha kwakho. Amanye amakhukhi ahlala agcinwe kudivayisi yakho uze uwasuse. Lawa makhukhi asenza sikwazi ukubona isiphequluli sakho ngokuzayo lapho uvakashela. Ungasetha isiphequluli sakho ukuze waziswe ngokusethwa kwamakhukhi futhi uvumele amakhukhi ezimweni ngazinye, ungafaki ukwamukelwa kwamakhukhi kwamacala athile noma ngokujwayelekile futhi wenze ukususwa okuzenzakalelayo kwamakhukhi lapho uvala isiphequluli. Uma wenza kungasebenzi amakhukhi, ukusebenza kwale webhusayithi kungavinjelwa. Amakhukhi adingekayo ukwenza inqubo yokuxhumana nge-elekthronikhi noma ukuhlinzeka ngemisebenzi ethile oyidingayo (isb. Umsebenzi wenqola yokuthenga) agcinwa ngokwesisekelo sobuciko. 6 Para. 1 lit. f GDPR igciniwe. Umhlinzeki wewebhusayithi unentshisekelo esemthethweni ekugcineni amakhukhi wokuhlinzekwa kwezinsizakalo zawo okungenaphutha nokwenziwe kahle. Uma amanye amakhukhi (isb. Amakhukhi wokuhlaziya ukusebenza kwakho kokusefa) agcinwa, lawa azophathwa ngokwahlukile kulesi simemezelo sokuvikelwa kwedatha.
Amafayela okungena kweseva
Umhlinzeki wewebhusayithi uqoqa ngokuzenzakalela futhi agcine imininingwane kulokho okubizwa ngamafayela okungena kweseva, isiphequluli sakho esidlulisela kuwo ngokuzenzekelayo. Lokhu yilawa: uhlobo lwesiphequluli nohlobo lwesiphequluli, uhlelo olusebenzayo olusetshenzisiwe, i-referrer URL, igama lomsingathi wekhompyutha efinyelela, isikhathi sesicelo seseva, ikheli le-IP, le datha ayihlanganisiwe neminye imithombo yedatha. Isisekelo sokucubungula idatha yi-Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR, evumela ukucutshungulwa kwedatha ukufeza inkontileka noma izinyathelo zangaphambi kwenkontileka.
4. Amathuluzi wokuhlaziya nokukhangisa
Le webhusayithi isebenzisa imisebenzi yesevisi yokuhlaziya iwebhu iGoogle Analytics. Umhlinzeki yiGoogle Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. I-Google Analytics isebenzisa okuthiwa "amakhukhi". Lawa ngamafayela wombhalo agcinwe kwikhompyutha yakho futhi avumela ukusetshenziswa kwakho kwewebhusayithi ukuthi kuhlaziywe. Imininingwane eyenziwe ikhukhi mayelana nokusebenzisa kwakho le webhusayithi ivame ukudluliselwa kuseva yeGoogle e-USA futhi igcinwe lapho. Ukugcinwa kwamakhukhi we-Google Analytics kusekelwe kubuciko. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Umhlinzeki wewebhusayithi unentshisekelo efanele ekuhlaziyeni ukusebenza komsebenzisi ukuze asebenzise iwebhusayithi yakhe kanye nokukhangisa kwayo.
Siqalise ukusebenza kwe-IP ngokungaziwa kule webhusayithi. Ngenxa yalokho, ikheli lakho le-IP lizofinyezwa i-Google emazweni angamalungu e-European Union noma kwezinye izivumelwano ezenza isivumelwano se-European Area Area ngaphambi kokuba idluliselwe e-USA. Ikheli le-IP eligcwele lidluliselwa kuphela kuseva yeGoogle e-USA futhi ifushaniswe lapho ezimweni ezihlukile. Egameni lomhlinzeki wale webhusayithi, iGoogle izosebenzisa lolu lwazi ukuhlola ukusetshenziswa kwakho kwewebhusayithi, ukuhlanganisa imibiko ngomsebenzi wewebhusayithi nokunikeza opharetha iwebhusayithi ezinye izinsizakalo ezihlobene nomsebenzi wewebhusayithi nokusetshenziswa kwe-inthanethi. Ikheli le-IP elidluliswa yisiphequluli sakho njengengxenye ye-Google Analytics ngeke lihlanganiswe nenye idatha ye-Google.
Ungavimbela ukugcinwa kwamakhukhi ngokusetha isoftware yakho ngokufanele; kodwa-ke, sithanda ukuveza ukuthi kulokhu ngeke ukwazi ukusebenzisa yonke imisebenzi yale webhusayithi ngokugcwele. Ungavimba futhi i-Google ekuqoqeni idatha eyenziwe ikhukhi futhi ehlobene nokusebenzisa kwakho iwebhusayithi (kufaka phakathi ikheli lakho le-IP) nasekusebenzeni le datha yi-Google ngokulanda i-plug-in yesiphequluli etholakala ngaphansi kwesixhumanisi esilandelayo bese ufaka: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .
Ukuphikisa okuphikisana nokuqoqwa kwedatha
Ungavimbela i-Google Analytics ekuqoqeni idatha yakho ngokuchofoza kusixhumanisi esilandelayo. Ikhukhi lokuphuma lizosethwa elivimbela ukuqoqwa kwemininingwane yakho ekuvakasheni okuzayo kule webhusayithi: Yenza kungasebenzi i-Google Analytics . Ungathola imininingwane eminingi ekuphatheni idatha yomsebenzisi ku-Google Analytics kusimemezelo sokuvikelwa kwedatha ye-Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .
Ukuhlelwa kwedatha ye-oda
Senze isivumelwano sokucutshungulwa kwedatha yenkontileka ne-Google futhi sisebenzise ngokuphelele izidingo eziqinile zeziphathimandla zokuvikela idatha zaseJalimane lapho zisebenzisa i-Google Analytics.